Haweeney naaska Masar lagaga jaray kadib markii kansar ku dhacay: Video - iftineducation.com
Haweeney naaska Masar lagaga jaray kadib markii kansar ku dhacay: Video
aadan21 / June 3, 2016
iftineducation.com – Haweeney Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Qahira ee dale Masar ayaa xanuun ay la ildarneyd oo dhinaca naaska uu ka haleelay cudurka Kansar ayaa lagger jaray si loo badbaadiyo nolosheeda.
Fowziya oo malign lagu guuleystay gashay ayaa lagaga jaray Naaska, innkastoo dawooyinkii ay qaadatay ay sababeen in timaha ay ka bideen ama ka haawaadeen. Fowziyo oo ah qof ku dhibaateysan Masar, waxay walaalaheeda Soomaaliyeed ka segeysaa calm.
HALKAN KA DAAWO FOWZIYO.
Ninkaaga In Uu naag kale la baashaalay Farsamo lagu ogaado -Dhaqaatiir Daraasad Cusub
Raga Somalida oo lasheegay in Ku waalanyihin Dumarka Dabada weyn